आज : २०७५ पौष २ सोमबार / 17th December, 2018 [email protected]
काठमाडौं– काममा ‘कूल’। खानपिनमा बिशेष ख्याल। नेपाल प्रहरीका २६औं महानिरीक्षक (आइजिपी) सर्वेन्द्र खनाल यी दुई कुरामा सचेत छन्। उमेरले ५२ वर्ष पुगे पनि ‘लुक्स’ भने युवाको झैं छ।
उनी खानामा चिल्लो पटक्कै मन पराउँदैनन्। मासुमा चिकेन ‘फेभरेट’ हो।
‘ब्रेकफास्ट’मा दूध र ब्रेड उनलाई सबैभन्दा धेरै मन पर्छ। खानामा दालभात नै उनलाई मिठो लाग्छ।
नेपाल प्रहरीको नेतृत्व हाँक्नुपर्दा दिनमा १५ घन्टासम्म दौडधूपमै बिताउँछन् उनी। कहिलेकाहीँ त बेलुका अबेरसम्म अफिसकै काम तथा मिटिङमा व्यस्त हुनुपर्छ।
सामान्यतया उनी बिहान ६ बजे उठ्छन्। मिलेसम्म ब्याटमिन्टन र टेनिस खेल्छन्। ‘समय मिले बिदाको दिन मर्निङ वाक जान्छु,’ उनीसँग बाध्यता छ, ‘तर आइजिपी भएपछि फुर्सद निकाल्दै गाह्रो।’
त्यसो त उनी सानैदेखि खेलमा सौखिन हुन्। काठमाडौंको कपुरधारामा हुर्किएका उनले नियमित फुटबल खेल्थे। तेक्वान्दोमा पनि उनको रुचि थियो। पहिला जिम पनि नियमित जान्थे। पछि यो क्रम टुट्यो।
२०४७ सालमा इन्सपेक्टर पदबाट प्रहरीमा भर्ना भएका उनले सधैं आफ्नो स्वास्थ्यमा ख्याल गरे। यसकारण पनि आइजिपी पदमा पुग्दासम्म उनको ‘लुक्स’ युवाझैं देखिन्छ। उनलाई भेट्नेहरूले पनि शारीरिक संरचनाको प्रशंसा गर्छन्।
खनालको शरीरमा अहिलेसम्म कुनै पनि रोग छैन। ‘केही दिनअघि मात्र स्वास्थ्य चेक गरेको थिए, प्रेसर १२०÷८० थियो,’ उनले भने।
उनले प्रहरीको कमान्ड सम्हालेको भएको चार महिना भएको छ। आइजिपी भएपछि पहिले जस्तो ‘एक्सरसाइज’ गर्न नपाएको उनी सुनाउँछन्। तर, खानपिनमा निकै ख्याल गरेका कारण फिटनेस उस्तै छ। उनी ड्रिंक्स पनि गर्छन्, तर कहिलेकाहीँ मात्र।
एकपटक योगगुरु रामेदवले काठमाडौंमा योग शिविर आयोजना गरेका थिए काठमाडौंमा। तयसबेला खनाल काठमाडौं प्रहरीका प्रमुख थिए। त्यही मौकामा आफूले रामदेवसँग फिटनेसका केही महत्वपूर्ण टिप्स लिएको उनी बताउँछन्।
फिटनेसको उनको अर्काे रहस्य भनेको सधैं ‘कूल’ रहने हो। तनावको असर शरीरमा पर्छ। तर, उनी जस्तोसुकै समस्या परे पनि तनाव लिँदैनन्। ७६ हजार प्रहरीको कमान्ड गरिरहेका उनलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म अनेकथरी फोन आउँछन्। दबाब उत्तिकै झेल्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, उनी कहिल्यै तनाव लिएर काम गर्दैनन्। दिमागलाई सधैं शान्त राख्ने कोसिस गर्छन्।
‘म बिहान एकपटक आफ्ना योजनाबारे सोच्छु,’ उनको फर्मुला छ, ‘आफ्नो दृष्टिकोणमा स्पष्ट छु, त्यसकारण कहिल्यै काममा तनाव लिन्न।’
त्यसैले पनि सधैं हट्टाकट्टा र फ्रेस देखिन या फर्मुला उनका लागि उपयोगी बनेको छ।
१. सरकारी अस्पतालको विकासमा सरकार प्रतिबद्ध : मन्त्री उपेन्द्र यादव
२. २० दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने सहमतिपछि मणिपालको ताला खुल्यो
३. क्रिकेटर रेग्मी अस्वस्थ, नर्भिकमा उपचार हुँदै
४. अभिनेत्री मनिषाको पुस्तक ‘हिल्ड’ पोखराबाट ‘ग्लोबल लन्च’ हुने
५. स्ट्रोक थ्रोम्बोलाइसिस मास्टर क्लास सम्पन्न
६. रामपुर अस्पतालको हालत: दरबन्दी छ, डाक्टर छैनन्, आएका पनि टिक्दैनन्
७. डा गोविन्द केसीले पुस १७ गतेबाट अनसन सुरु गर्ने
८. तेस्रो मेडिकल एक्स्पो सम्पन्न
९. विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँचमा खटिए यी विद्यालय नर्स
१०. चिरायु अस्पताल र हिमालयन बैंकबीच सम्झौता
४. नेपालमा २९ नयाँ औषधि उद्योग थपिँदै : क्यान्सरदेखि एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन गर्ने लक्ष्य
५. छि! चिकित्साका विद्यार्थी बस्ने होस्टलको हालत: खानेपानीको ट्याँकीमा लेउ, लेदो र गड्यौला
६. कर्मचारी समायोजनका लागि अनलाइन फारम भर्न हेल्प डेस्क सञ्चालन हुने
७. समायोजन अध्यादेशमा स्वास्थ्यका ८ संगठनको आपत्ति, राखे ९ बुँदे माग
९. कर्मचारी समायोजन : फाजिलमा रहेका कर्मचारीले कुन कार्यालय उल्लेख गर्ने?